प्रतिक्षामा | Knowledge & Fun Park
मेरै अगाडि छे जसलाई म भित्री मनदेखि नै चाहन्छु । ऊ मेरी हुन सक्दिन मलाई थाहा छ । उनको विवाह नभएपनी उनि अर्कैकी भैसकी त्यो पनि मलाई थाहा छ । उनी मेरो हुन सक्दिन भन्ने थाहा हुदा हुदैपनी मलाई एकदम मन पर्छ । किनकिन उनी मेरै हुन जस्तै लाग्छ । मबाट अरुलै खोसेर लैजान सक्दैन जस्तो लाउछ । मप्रति जति नरम भएर बोल्छे लाग्छ उनी अरुसंग त्यस्तरी बोल्दिन ।
हामी बीचको मौनता तोडन उसको मोबाइल फोनको घण्टी बज्छ । उनले फोन उठाउछिन् । एकछिन राम्रैसंग बोल्छिन । अनि उ मस्किन थाल्छिन् । उन्को ओठले आङ तान्छ । सबै मिलेका दात देखिन्छन् !! उनको त्यो हासोले नै त हो नि मलाई लोभ्याएको । अनुहार लाम्चो गोरो, कपाल घुम्रीएको अनि आँखा मृगका जस्ता । उन्को हरेक हाउभाउ हेर्न थाले । घरी हात माथी राखेकी छिन त घरी निधार खुम्च्याएकी छिन् । त्यो तिनको मस्काइले मेरो मनमा चोट दिइराखेको थियो।
मनमा पीडा बोध भइराखेको थियो । विभिन्न शंकाहरु खेलेका थिए । कति मस्केकी होली, कुन तोर्पेसंग बोलेकी होली, के त्यो केटो म भन्दा राम्रो छ त ?? किन बोल्नु पर्या थियो मेरै अगाडि । सायद म एक्लो हुदो हुँ त मेरो आँखाबाट आँसु खसिसकेका हुन्थे । करिब 20/25 मिनेटपछि फोन राखिन । मैले टुलुटुलु हेरे , उनले पनि हेरिन् तर बोल्ने आट न मैले गरे न त उनले नै ……